Biden gbochiri ma kwụsị ire TikTok | Gam akporosis
Dị ka akwụkwọ akụkọ The Wall Street Journal si kwuo, TikTok rerere na ulo ahia nke Oracle,, dị ka Biden chọrọ iji nyochaa iwu maka ngwa China. Ekwesiri icheta na ihe niile mere na Huawei bidoro na afọ 4 nke Trump, mgbe ọ na-apụ, ihe niile nwere ike ịlaghachi na ikike ya.
Anyị amaralarị nke ahụ Ekwentị TikTok ngwa na aka ndị China akpọrọ ịma aka mba maka ọdịmma US maka nchekwa, mana ọ bụ eziokwu na ọ bụghị naanị ya "na-achịkọta" data.
Ma ọ bụ ya ihe niile metụtara na mgbidi dijitalụ nke mba na-ewu, olee otu data onye ọrụ si baa uru na otu teknụzụ nwere ike isi gbanwee n'ọdịnihu dị nso.
Dị ka anyị si mara, atụmatụ US ịre arụmọrụ TikTok na mba ahụ A ga-erere ya na otu nke ga-agụnye Oracle Corp. na Walmart Inc,. akpọnwụwo ruo mgbe ebighị ebi.
Ihe niile bụ n'ihi na Onye isi ala Biden chọrọ ime nyocha sara mbara nke mbọ onye bu ya ụzọ iji chọpụta ihe ize ndụ nchebe sitere na ụlọ ọrụ teknụzụ ndị China; Na Otu n'ime nke nwere ike ịbanye, n'ezie, Huawei.
Nkwekọrịta TikTok, nke bụ onye Onye isi ala Donald Trump na-akwagide mgbe ahụ, na-agbọnụ kemgbe ọdịda ikpeazụ n'ihi nsogbu ịma aka iwu na-aga nke ọma nke onye nwe TikTok bụ ByteDance Ltd nke China.
Okwu ndị a na mkparịta ụka ndị ahụ, ihe ọbụla ịchọrọ ịkpọ ha, ga na-aga n’ihu n’etiti otu abụọ a iji lekwasị anya n’ụzọ ga-egbochi gọọmentị China data TikTok na-anakọta n'aka ndị ọrụ America. Mana n'oge a enweghi ụzọ doro anya banyere otu esi edozi nsogbu ndị a ruo mgbe gọọmentị Biden kpebiri ọrụ ya.
Ya mere, ihe niile dị ka ihe niile na-alaghachi na obere oge ya na ereghi TikTok na Oracle n'oge a. Ugbu a ọ bụ oge ichere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Biden na-etinye aka na TikTok ọrịre na ụlọ ahịa Oracle